Mila angon-drakitra momba ny kalitaon'ny varotra mba ho entin'ny data - Tolona & Vahaolana | Martech Zone
Talata, Jona 14, 2022 Talata, Jona 28, 2022 Farah Kim
Iharan'ny fanerena mafy ny mpivarotra mba ho entin'ny data. Na izany aza, tsy ho hitanao ny mpivarotra miresaka momba ny kalitaon'ny angona ratsy na manontany ny tsy fisian'ny fitantanana angon-drakitra sy ny fananana data ao anatin'ny fikambanany. Miezaka kosa izy ireo mba ho voatarika amin'ny angona ratsy. Fanesoana mampalahelo!
Ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy ekena ho olana akory ny olana toy ny angona tsy feno, typos, ary duplicate. Nandany ora maro izy ireo hanamboatra lesoka ao amin'ny Excel, na hikaroka plugins hampifandray loharano angon-drakitra sy hanatsara ny fizotran'ny asa, saingy tsy fantany fa olana momba ny kalitaon'ny angon-drakitra izay misy fiantraikany amin'ny fikambanana izay miteraka fahaverezana an-tapitrisany. vola.
Ny mpivarotra ankehitriny dia tototry ny metrika, ny fironana, ny tatitra ary ny fanadihadiana ka tsy manam-potoana hijerena ireo fanamby momba ny kalitaon'ny angona. Fa izay no olana. Raha tsy manana angon-drakitra marina ny mpivarotra, ahoana no ahafahan'izy ireo mamorona fanentanana mahomby?
Nanatona mpivarotra maromaro aho rehefa nanomboka nanoratra ity lahatsoratra ity. Tsara vintana aho nanana Axel Lavergne, mpiara-manorina ny ReviewFlowz hizara ny traikefany amin'ny angona mahantra.
Ireto ny valin-teniny amin'ny fanontaniako.
Inona no olana voalohany nataonao tamin'ny kalitaon'ny angona rehefa nanamboatra ny vokatrao ianao? Nanangana motera famokarana famerenana aho ary mila fintonana vitsivitsy hampiasaina handefasana fangatahana famerenana amin'ny mpanjifa falifaly amin'ny fotoana mety hamelany hevitra tsara.
Mba hahatanteraka izany dia namorona ny isa Net Promoter ny ekipa (NPS) fanadihadiana izay halefa 30 andro aorian'ny fisoratana anarana. Isaky ny misy mpanjifa mamela NPS tsara, tamin'ny voalohany 9 sy 10, taty aoriana dia nitarina ho 8, 9, ary 10, dia nasaina izy ireo hamela famerenana ary hahazo karatra fanomezana $10 ho setrin'izany. Ny fanamby lehibe indrindra eto dia ny fametrahana ny fizarana NPS amin'ny sehatry ny automation marketing, raha ny angon-drakitra kosa dia mipetraka ao amin'ny fitaovana NPS. Ny loharanon'ny angon-drakitra tapaka sy ny angona tsy mifanaraka amin'ny fitaovana dia lasa sakana izay nitaky ny fampiasana fitaovana sy rindranasa fanampiny.
Rehefa nanohy nampifangaro ireo lozika samihafa sy teboka fampidirana ny ekipa, dia tsy maintsy niatrika ny fitazonana ny tsy fitoviana amin'ny angon-drakitra lova izy ireo. Mivoatra ny vokatra, izay midika fa miova tsy tapaka ny angon-drakitra momba ny vokatra, mitaky ny orinasa hitazona ny skema angon-drakitra momba ny tatitra tsy tapaka rehefa mandeha ny fotoana.
Inona no dingana nataonao hamahana ny olana? Nitaky fiaraha-miasa be dia be niaraka tamin'ny ekipan'ny angon-drakitra mba hananganana injeniera data mety amin'ny lafiny fampidirana. Mety ho tena fototra tokoa, saingy miaraka amin'ny fampidirana maro isan-karazany, ary fandefasana fanavaozam-baovao maro, ao anatin'izany ny fanavaozana misy fiantraikany amin'ny fikorianan'ny fisoratana anarana, dia tsy maintsy nanangana lozisialy maro samihafa izahay mifototra amin'ny hetsika, angon-drakitra static, sns.
Nanana teny ve ny sampan-draharahanao momba ny famahana ireo fanamby ireo? Zavatra sarotra izany. Rehefa mandeha any amin'ny ekipa data manana olana manokana ianao dia mety hihevitra ianao fa vahaolana mora izany ary izany 1h ihany ny fanamboarana fa matetika dia misy fiovana marobe tsy fantatrao. Amin'ny tranga manokana momba ny plugins, ny loharanon'ny olana dia ny fitazonana angon-drakitra mifanaraka amin'ny angona lova. Mivoatra ny vokatra, ary sarotra tokoa ny mitazona skema angon-drakitra momba ny tatitra tsy miovaova rehefa mandeha ny fotoana.
Eny, azo antoka fa milaza ny filana, fa raha ny amin'ny fomba fampiharana ny fanavaozana sns. Tena tsy afaka manohitra ny ekipa injeniera data mety ianao izay mahafantatra fa tsy maintsy miatrika fiovana maro izy ireo mba hanatanterahana izany, ary "hiaro" ny angon-drakitra amin'ny fanavaozana ho avy.
Nahoana no tsy miresaka momba ny mpivarotra angona fitantanana na ny kalitaon'ny angona na dia miezaka ny ho entin'ny data aza izy ireo? Heveriko fa tena tranga tsy fahita firy ny olana. Ny ankamaroan'ny mpivarotra noresahiko dia manao tsinontsinona ny fanamby amin'ny fanangonana angon-drakitra, ary amin'ny ankapobeny, mijery ireo KPI izay efa nisy nandritra ny taona maro nefa tsy nanontany azy ireo mihitsy. Saingy ny antsonao hoe fisoratana anarana, fitarihana, na mpitsidika tsy manam-paharoa aza dia miova faobe miankina amin'ny fametrahanao fanaraha-maso sy ny vokatrao.
Ohatra tena fototra: tsy manana fanamarinana mailaka ianao ary manampy izany ny ekipan'ny vokatrao. Inona ary ny fisoratana anarana? Alohan'ny sa aorian'ny fanamarinana? Tsy hanomboka hiditra amin'ny haingo rehetra amin'ny fanaraha-maso amin'ny Internet aho.
Heveriko fa misy ifandraisany ihany koa amin'ny attribution sy ny fomba fananganana ekipa marketing. Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tompon'andraikitra amin'ny fantsona iray na ampahany amin'ny fantsona, ary rehefa mamintina ny toetran'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa amin'ny fantsona misy azy ianao, dia matetika eo amin'ny 150% na 200% ny attribution. Toa tsy mitombina izany rehefa apetrakao toy izany, ka izay no mahatonga ny olona tsy hanao izany. Ny lafiny iray hafa dia angamba ny fanangonana angon-drakitra matetika dia tonga amin'ny olana ara-teknika, ary ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy dia mahazatra azy ireo. Amin'ny farany, tsy afaka mandany ny fotoananao amin'ny fanamboarana angon-drakitra ianao ary mitady fampahalalana tonga lafatra amin'ny piksel satria tsy azonao izany.
Inona no dingana azo ampiharina/eo no ho eo araka ny eritreritrao fa azon'ny mpivarotra atao ny manamboatra ny kalitaon'ny angona mpanjifany?Ataovy eo amin'ny toeran'ny mpampiasa iray ny tenanao, ary andramo ny tsirairay amin'ireo funnel-nao. Manontania tena hoe karazana hetsika na hetsika fiovam-po izay atombokao isaky ny dingana. Azo inoana fa ho gaga ianao amin’izay tena mitranga. Ny fahatakarana ny dikan'ny isa amin'ny tena fiainana, ho an'ny mpanjifa, mpitarika na mpitsidika, dia tena ilaina amin'ny fahatakarana ny angonao.
Ny Marketing dia manana fahatakarana lalina momba ny mpanjifa nefa miady mafy amin'ny famahana ny olan'ny kalitaon'ny angona
Ny marketing dia ivon'ny fikambanana rehetra. Ny sampana no manaparitaka ny vokatra. Ny departemanta no tetezana eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa. Ny departemanta izay tena marina, no mitantana ny fampisehoana.
Na izany aza, sahirana mafy izy ireo amin'ny fidirana amin'ny angon-drakitra kalitao. Ny ratsy kokoa, araka ny voalazan'i Axel, mety tsy takatr'izy ireo akory ny dikan'ny angon-drakitra mahantra sy ny zavatra atrehiny! Ireto misy antontan'isa azo avy amin'ny tatitra DOMO, Marketing's New MO, mametraka zavatra amin'ny fomba fijery:
Ny 46% amin'ny mpivarotra dia milaza fa ny hamaroan'ny fantsona sy ny loharanom-baovao dia nanasarotra kokoa ny drafitra ho an'ny fotoana maharitra.
30% ny mpivarotra zokiolona no mino fa ny CTO sy ny departemantan'ny IT dia tokony handray ny andraikiny amin'ny fananana data. Mbola mikaroka ny tompon'ny data ny orinasa!
17.5% no mino fa misy ny tsy fahampian'ny rafitra manangona angon-drakitra ary manolotra mangarahara manerana ny ekipa.
Ireo isa ireo dia manondro fa tonga ny fotoana hananan'ny varotra ny angon-drakitra sy ny fitakiana ny famokarana azy ho tena entin'ny data.
Inona no azon'ny mpivarotra atao mba hahatakarana, hamantarana ary hiatrehana ireo fanamby momba ny kalitaon'ny angona?
Na dia eo aza ny angon-drakitra no fototry ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny raharaham-barotra, orinasa maro no mbola miady mafy amin'ny fanatsarana ny rafi-pitantanana ny angona mba hamahana ny olana momba ny kalitao.
Ao amin'ny tatitra nataon'i Marketing Evolution, mihoatra ny ampahefatry ny 82% naratra tamin'ny angon-drakitra tsy manara-penitra ireo orinasa tamin'ny fanadihadiana. Ny mpivarotra dia tsy afaka manafoana ny fiheverana momba ny kalitaon'ny angon-drakitra ao ambanin'ny karipetra ary tsy afaka ny tsy hahafantatra ireo fanamby ireo. Inona àry no tena azon'ny mpivarotra atao mba hiatrehana ireo fanamby ireo? Ireto misy fanao dimy tsara hanombohana.
Fomba fanao tsara indrindra 1: Manomboka mianatra momba ny olana momba ny kalitaon'ny angona
Ny mpivarotra iray dia mila mahafantatra ny olana momba ny kalitaon'ny angona toy ny mpiara-miasa aminy IT. Mila mahafantatra olana mahazatra ateraky ny fitambaran'ny angona ianao izay ahitana fa tsy voafetra amin'ny:
Typos, hadisoana tsipelina, hadisoana anarana, hadisoana firaketana angona
Olana amin'ny fivoriambe nomena anarana sy ny tsy fisian'ny fenitra toy ny laharan-telefaona tsy misy kaody firenena na mampiasa endrika daty samihafa
Tsipiriany tsy feno toy ny adiresy mailaka tsy hita, anarana farany, na fampahalalana manan-danja ilaina amin'ny fampielezan-kevitra mahomby
Fampahalalana tsy marina toy ny anarana diso, laharana diso, mailaka sns
Loharano angon-drakitra samihafa izay andraketanao ny mombamomba ny olona iray ihany, saingy voatahiry amina sehatra na fitaovana samihafa manakana anao tsy hahazo fijery mitambatra.
Angon-drakitra avo roa heny izay namerimberina tsy nahy izany fampahalalana izany ao amin'ny loharano angona iray na amin'ny loharano angona hafa
Toy izao ny fisehon'ny angona ratsy amin'ny loharano iray:
Ny fahafantaranao ny tenanao amin'ny teny toy ny kalitaon'ny angona, ny fitantanana ny angona, ary ny fitantanana ny angona dia afaka manampy anao handroso lavitra amin'ny famantarana ny lesoka ao amin'ny Fitantanana ny Fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) sehatra, ary amin'ny alàlan'izany, mamela anao handray andraikitra araka izay ilaina.
Fomba fanao tsara indrindra 2: Ataovy laharam-pahamehana hatrany ny angona momba ny kalitao
Efa tany aho, nanao izany. Maka fanahy ny tsy miraharaha angona ratsy satria raha tena mandavaka lalina ianao dia ny 20% amin'ny angonao ihany no tena azo ampiasaina. Mihoatra ny 80% ny angona dia very maina. Ataovy laharam-pahamehana ny kalitao fa tsy ny habe hatrany! Azonao atao izany amin'ny fanatsarana ny fomba fanangonana data. Ohatra, raha mirakitra angona avy amin'ny endrika tranonkala ianao dia ataovy izay hahazoanao antoka fa angon-drakitra ilaina ihany no angoninao ary mametra ny filan'ny mpampiasa hanoratra an-tànana ny fampahalalana. Arakaraky ny tsy maintsy 'manoratra' ny mombamomba ny olona iray, no avo kokoa ny mety handefasana angona tsy feno na tsy marina.
Fomba fanao tsara indrindra 3: Ampiasao ny Teknolojia momba ny kalitaon'ny angona marina
Tsy mila mandany dolara iray tapitrisa ianao amin'ny fanamboarana ny kalitaon'ny angonao. Misy fitaovana sy sehatra am-polony any izay afaka manampy anao handamina ny angon-drakitrao tsy misy tabataba. Ireto fitaovana ireto dia afaka manampy anao amin'ny:
Data profiling: Manampy anao hamantatra lesoka isan-karazany ao anatin'ny fitambaran'ny angonao toy ny saha tsy hita, ny dika mitovy, ny tsipelina diso sns.
Fanadiovana data: Manampy anao hanadio ny angonao amin'ny alàlan'ny fanovana haingana kokoa avy amin'ny angona mahantra ho tonga lafatra.
Data mifanentana: Manampy anao hampifanaraka ny angon-drakitra amin'ny loharano angona samihafa ary hampifandray/manambatra ny angona avy amin'ireo loharano ireo. Ohatra, azonao atao ny mampiasa data match hampifandraisana ireo loharano angona an-tserasera sy ivelan'ny aterineto.
Ny teknolojia momba ny kalitaon'ny data dia ahafahanao mifantoka amin'ny zava-dehibe amin'ny fikarakarana ny asa miverimberina. Tsy mila manahy momba ny fandaniana fotoana ianao amin'ny fanamboarana ny angonao amin'ny Excel na ao anatin'ny CRM alohan'ny hanombohana fampielezan-kevitra. Miaraka amin'ny fampidirana fitaovana momba ny kalitaon'ny angona, dia afaka miditra amin'ny angona tsara ianao alohan'ny fampielezan-kevitra rehetra.
Fomba fanao tsara indrindra 4: Ampidiro ny mpitantana ambony
Ny mpanapa-kevitra ao amin'ny fikambananao dia mety tsy mahafantatra ny olana, na na dia izy ireo aza, dia mbola mihevitra izy ireo fa olana IT fa tsy olana ara-barotra. Eto ianao dia mila miroso amin'ny fanolorana vahaolana. Ratsy data ao amin'ny CRM? Ratsy angona avy amin'ny fanadihadiana? Data mpanjifa ratsy? Ireo rehetra ireo dia olana ara-barotra ary tsy misy ifandraisany amin'ny ekipa IT! Saingy raha tsy misy mpivarotra manolotra soso-kevitra hamahana ny olana, ny fikambanana dia mety tsy hanao na inona na inona momba ny olana momba ny kalitaon'ny angona.
Fomba fanao tsara indrindra 5: Fantaro ireo olana eo amin'ny sehatra loharano
Indraindray, ny olana momba ny angona mahantra dia vokatry ny dingana tsy mahomby. Na dia afaka manadio angon-drakitra eny ambonin'ny tany aza ianao, raha tsy fantatrao ny fototry ny olana, dia ho voan'ny olana momba ny kalitao mitovy ianao rehefa miverimberina.
Ohatra, raha manangona angona fitarihana avy amin'ny pejy fiantsonana ianao, ary hitanao fa ny 80%-n'ny angona dia manana olana amin'ny fidiran'ny nomeraon-telefaona, azonao atao ny mampihatra ny fanaraha-maso ny fidiran'ny angona (toy ny fametrahana sahan'ny kaodin-tanàna tsy maintsy atao) mba hahazoana antoka fa' mahazo angon-drakitra marina indray.
Ny fototry ny ankamaroan'ny olan'ny angona dia mora vahana. Mila maka fotoana fotsiny ianao handinihana lalindalina kokoa sy hamantatra ny olana fototra ary hanao ezaka fanampiny hamahana ilay olana!
Data no fototry ny hetsika ara-barotra
Ny angon-drakitra no fototry ny hetsika ara-barotra, fa raha tsy marina, feno, na azo antoka io angona io, dia ho very vola ianao noho ny fahadisoana lafo. Tsy voafetra amin'ny departemanta IT intsony ny kalitaon'ny data. Ny mpivarotra dia tompon'ny angon-drakitra mpanjifa ary noho izany dia tsy maintsy afaka mampihatra ireo dingana sy teknolojia mety amin'ny fanatrarana ny tanjon'izy ireo.
Tags: CRMDataangona kalitaodata-noroahina-barotrawinpure
Farah Kim dia mpivarotra vokatra mifototra amin'ny olombelona izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanatsorana ny vaovao sarotra ho fomba fijery azo atao ho an'ny mpihaino orinasa. Faly amin'ny fitantanana angon-drakitra izy ary mikendry ny hanampy ny orinasa handresy ny tsy fahombiazan'ny asa vokatry ny fomba fitantanana angona tsy mahomby.
Lisitry ny lisitry ny fanentanana fanentanana amin'ny marketing: dingana 10 mankany amin'ny vokatra tsara kokoa